Eli Lilifa Lethu Lokomoya | Isifundo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseRashiya Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUruund IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
Yintoni ayenzileyo uThixo ukuze alondoloze iBhayibhile?
UYehova uye walilondoloza njani igama lakhe ukuze silazi?
Chaza indlela uThixo aye wayilondoloza ngayo inyaniso yokomoya kwiinzame zokuyitshabalalisa.
1. Yintoni uYehova aye ngothando wayigcinela abantu ukuze ibancede?
NGELIZWI lakhe, uYehova, uThixo “ophilayo nohlala ekho,” usixelela oko simele sikwenze ukuze nathi siphile ngonaphakade. Loo miyalelo ayitshintshi kuba iBhayibhile ithi: “Ilizwi likaYehova lihlala likho ngonaphakade.” (1 Pet. 1:23-25) Simbulela gqitha uYehova ngothando lokuba esigcinele le nkcazelo ibaluleke kangaka ikwiLizwi lakhe, iBhayibhile!
2. KwiLizwi lakhe, yintoni uThixo aye wayigcinela abantu bakhe ukuba bayisebenzise?
2 KwiLizwi lakhe, uThixo uye wagcinela abantu bakhe kanye elo gama wazikhethela lona nafuna balisebenzise. IZibhalo zimkhankanya okokuqala “uYehova uThixo” ‘kwimbali yamazulu nomhlaba.’ (Gen. 2:4) Ummangaliso kukuba igama likaThixo labhalwa izihlandlo eziliqela kumacwecwe eMithetho Elishumi. Ngokomzekelo, umthetho wokuqala uthi: “NdinguYehova uThixo wakho.” (Eks. 20:1-17) Igama likaThixo lisekho kuba iNkosi enguMongami uYehova iye yalilondoloza iLizwi negama layo phezu kwayo nje imigudu kaSathana yokulitshayela.—INdu. 73:28.
3. Nangona ubuxoki bonqulo busasazekile, yintoni asinike yona uThixo?
3 KwiLizwi lakhe, uYehova uye walondoloza nenyaniso. Nangona ubuxoki bonqulo busasazeke emhlabeni wonke, simbulela gqitha uThixo ngokusinika ukukhanya kokomoya nenyaniso! (Funda iNdumiso 43:3, 4.) Ngoxa inyambalala yabantu ihamba ebumnyameni, thina sivuyiswa kukuqhubeka sihamba ekukhanyeni okuvela kuThixo.—1 Yoh. 1:6, 7.
SINELIFA ESIMELE SILIXABISE
4, 5. Liliphi ilungelo elikhethekileyo esiye sanalo ukususela ngowe-1931?
4 NjengamaKristu, sinelifa elixabisekileyo. ICollins Cobuild English Dictionary ithi: “Ilifa lelizwe zizo zonke iimpawu, izithethe, okanye iinkalo ezithile zobomi eziye zadluliselwa kwizizukulwana ngezizukulwana ukutyhubela iminyaka.” Ilifa lethu lokomoya liquka iintsikelelo zokufumana ulwazi oluchanileyo lweLizwi likaThixo nokuyiqonda kakuhle inyaniso ephathelele uThixo neenjongo zakhe. Iquka nelinye ilungelo elikhethekileyo.
Savuya gqitha kukwamkela igama elithi amaNgqina kaYehova kwindibano yethu yowe-1931
5 Elo lungelo laba yinxalenye yelifa lethu lokomoya kwindibano eyayiseColumbus, eOhio, eUnited States, ngowe-1931. Kwakukho ucwangciso lwendibano olubhalwe oonobumba abathi “JW.” Omnye udade wathi: “Abazalwana noodade babefunisela bezibuza eyona nto imelwa ngabo nobumba.” Sasikade sibizwa ngokuba singaBafundi beBhayibhile, kodwa ngeCawa, ngoJulayi 26, 1931 samkela igama elithi amaNgqina kaYehova. Savuyiswa gqitha kukufumana elo gama lisekelwe eBhayibhileni. (Funda uIsaya 43:12.) Omnye umzalwana uthi: “Andinakuze ndiyilibale intswahla yezandla lihlombe elalilapho.” Akukho namnye emhlabeni owayefuna ukubizwa ngelo gama, kodwa uThixo uye wasisikelela ngokusebenzisa lona ngaphezu kweminyaka engama-80. Lilungelo elikhetheke ngokwenene ukuba liNgqina likaYehova!
6. Ilifa lethu lokomoya liquka yiphi inkcazelo echanileyo?
6 Eli lifa lethu lokomoya liquka ulwazi nenkcazelo ebalulekileyo yembali yangaphambili. Ngokomzekelo, singabalula uAbraham, uIsake, noYakobi. Aba solusapho neentsapho zabo bamele ukuba babexubusha ngendlela yokukholisa uYehova. Yiloo nto singamangaliswa yinto yokuba uYosefu engazange avume ‘ukona kuThixo’ ngokulala nomfazi kaPotifare! (Gen. 39:7-9) Ngenkulungwane yokuqala, amaKristu ayebaliselana ngoThixo. UPawulos wabalisela ibandla oko wayekufundiswe nguYesu ngeSidlo SeNkosi Sangokuhlwa. (1 Kor. 11:2, 23) Namhlanje, sincedwa yiBhayibhile ukuze sazi indlela efanelekileyo yokunqula uThixo “ngomoya nenyaniso.” (Funda uYohane 4:23, 24.) IBhayibhile yenzelwe ukukhanyisela bonke abantu, kodwa thina bakhonzi bakaYehova siyixabisa ngokukhethekileyo.
7. Sisiphi isithembiso esikhuthazayo esililifa kuthi?
7 Eli lifa liquka neengxelo ezipapashwe kutshanje ezingqina ukuba ‘uYehova usecaleni lethu.’ (INdu. 118:7) Oku kusenza sizive sinqabisekile, kwanokuba siyatshutshiswa. Sikhuthazwa ngakumbi sesi sithembiso sililifa kuthi: “‘Nasiphi na isixhobo esiya kuyilwa nxamnye nawe asiyi kuphumelela, nalo naluphi na ulwimi oluya kuphakama nxamnye nawe ekugwetyweni uya kulugwebela isohlwayo. Lilo elo ilifa labakhonzi bakaYehova, yaye ubulungisa babo buphuma kum,’ utsho uYehova.” (Isa. 54:17) Akukho nasinye isixhobo sikaSathana esiya kusenzakalisa ngonaphakade.
8. Yintoni esiza kuyixubusha kweli nqaku nakwelilandelayo?
8 USathana uzame ngamandla ukutshabalalisa iBhayibhile, ukuze abantu bangalazi igama likaYehova, itsho ifihlakale inyaniso. Kodwa soze amelane noYehova oyiphanzise yonke imigudu yakhe. Kweli nqaku nelilandelayo, siza kuxubusha (1) ngendlela uThixo aye wayilondoloza ngayo iBhayibhile; (2) waqinisekisa ngayo ukuba abantu bayalazi igama lakhe; (3) naye uBawo wethu wasezulwini wanguMthombo noMlondolozi ngayo wale nyaniso sikuyo.
UYEHOVA UYE WALONDOLOZA IBHAYIBHILE NESIGIDIMI SAYO
9-11. Yiyiphi imizekelo ebonisa ukuba iBhayibhile iye yasinda kwimigudu eliqela?
9 UYehova uye wayilondoloza iBhayibhile kuyo yonke imigudu yokuyitshabalalisa. IEnciclopedia Cattolica (iEncyclopedia yamaKatolika) ithi: “Ngowe-1229, iCawa yamaKatolika yakwalela ukufundwa kweenguqulelo zeelwimi eziqhelekileyo zeBhayibhile. . . Inkongolo eyayikhokelwa nguJames I ngowe-1234 eTarragona, eSpeyin, yenza isigqibo esifanayo. . . . ICawa yamaRoma yangenelela okokuqala ngowe-1559 xa uPaul IV wayesalela ukushicilelwa okanye ukuba neBhayibhile yolwimi lwakho ngaphandle kwemvume yeOfisi Engcwele.
10 IBhayibhile iye yasinda kuzo zonke iinzame zokuyitshabalalisa. Malunga nowe-1382, uJohn Wycliffe nezinxulumani zakhe bavelisa inguqulelo yokuqala yeBhayibhile yesiNgesi. Omnye umguquleli weBhayibhile yaba nguWilliam Tyndale, owabulawa ngowe-1536. Ebotshelelwe kwisibonda somthi, kuthiwa wakhala esithi: “Nkosi, nceda uvule amehlo okumkani waseNgilani.” Emva koko wakrwitshwa waza watshiswa.
11 IBhayibhile iye yasinda phezu kwayo nje inkcaso. Ngokomzekelo, ngowe-1535 uMiles Coverdale wavelisa iBhayibhile yesiNgesi. Wasebenzisa iinxalenye zenguqulelo kaTyndale ‘kwiTestamente Entsha’ ‘nakwiTestamente Endala’ ukusuka kwiGenesis ukusa kwiziKronike. Ezinye iinxalenye zeZibhalo waziguqulela ngokusuka kwisiLatini nakwiBhayibhile yesiJamani kaMartin Luther. Namhlanje, sivuyiswa kukuba neNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ecacileyo, echanileyo, nekulula ukuyisebenzisa xa sishumayela. USathana okanye abantu abanakuze bakwazi ukuyitshabalalisa iBhayibhile.
UYEHOVA UYE WALILONDOLOZA IGAMA LAKHE
Amadoda afana noTyndale anikela ngobomi bawo ngenxa yeLizwi likaThixo
12. Yiyiphi indima edlalwe yiNguqulelo Yehlabathi Elitsha ekulondolozeni igama likaThixo?
12 UYehova uThixo uye waqiniseka ukuba igama lakhe liyalondolozwa eBhayibhileni. INguqulelo Yehlabathi Elitsha idlala indima ephambili kule nkalo. Kwintshayelelo yayo, ikomiti yabaguquleli abazinikeleyo yathi: “Eyona nkalo ibalulekileyo ngale nguqulelo kukubuyisela kwayo igama likaThixo kwindawo yalo efanelekileyo eBhayibhileni. Oko kuye kwenziwa ngokusebenzisa igama eliqhelekileyo elithi ‘Yehova’ izihlandlo ezingama-6 973 kwiZibhalo zesiHebhere nezingama-237 kwiZibhalo ZamaKristu ZesiGrike.” Ngoku, le nguqulelo yeBhayibhile ifumaneka ngeelwimi ezingaphezu kwe-116, yaye sekuprintwe ezingaphezu kwe-178 545 862.
13. Kutshiwo njani ukuba abantu babelazi igama likaThixo ukususela ekudalweni kwabo?
13 Abantu babelazi igama likaThixo ukususela ekudalweni kwabo. UAdam noEva babelazi, yaye babekwazi nokulibiza. Xa uHam engazange amhlonele uyise emva komkhukula, uNowa wathi: “Makabongwe uYehova, uThixo kaShem, uKanan [unyana kaHam] abe likhoboka lakhe.” (Gen. 4:1; 9:26) NoThixo wazichaza wathi: “NdinguYehova. Lilo elo igama lam; andiluniki omnye uzuko lwam.” Waphinda wathi: “NdinguYehova, akakho omnye. Ngaphandle kwam akukho Thixo.” (Isa. 42:8; 45:5) UYehova uye waqiniseka ukuba igama lakhe liyalondolozwa nokuba abantu emhlabeni wonke bayalazi. Lilungelo ngokwenene eli sinalo lokusebenzisa igama likaYehova siphinde sibe ngamaNgqina akhe! Eneneni sithi: “Egameni loThixo wethu siya kuphakamisa iibhanile zethu.”—INdu. 20:5.
14. Ngaphandle kwaseBhayibhileni, yiyiphi enye indawo elifumaneka kuyo igama likaThixo?
14 Igama likaThixo alifumaneki eBhayibhileni kuphela. Kukho iLitye lakwaMowabhi, elafunyanwa eDhiban (Dibon), malunga neekhilomitha ezingama-21 kwimpuma yoLwandle Olufileyo. Eli litye likhankanya uKumkani uOmri wakwaSirayeli lize lichaze icala loKumkani uMesha wakwaMowabhi ngokuvukela kwakhe uSirayeli. (1 Kum. 16:28; 2 Kum. 1:1; 3:4, 5) Kodwa eyona nto ibangela umdla ngeli Litye lakwaMowabhi kukuba linegama likaThixo, elibhalwe ngoonobumba beTetragrammaton. Le ndlela ivela ngokuphindaphindiweyo kwiileta zikaLakishe ezavunjululwa kwaSirayeli.
15. Yintoni iSeptuagint, yaye yabakho njani?
15 Abaguquleli beBhayibhile bokuqala baba nenxaxheba ekulondolozweni kwegama likaThixo. Emva kokuthinjelwa eBhabhiloni ukususela ngowama- 607 B.C.E. ukusa kowama-537 B.C.E., amaYuda amaninzi akazange abuyele kwaYuda nakwaSirayeli. Ngenkulungwane yesithathu ngaphambi kweXesha Eliqhelekileyo, eAlexandriya, eYiputa ekwakuhlala amaYuda amaninzi ngoko, kwafuneka ukuba iZibhalo zesiHebhere awayenazo ziguqulelwe kwisiGrike, ulwimi olwaluthethwa ziintlanga ngeentlanga ngoko. Loo nguqulelo, ekuthiwa yiSeptuagint yagqitywa kwinkulungwane yesibini Ngaphambi kweXesha Eliqhelekileyo. Ezinye iikopi zayo zazinegama likaYehova elibhalwe ngesiHebhere.
16. Yenza umzekelo wokusetyenziswa kwegama likaThixo kwincwadi eyapapashwa okokuqala ngowe-1640.
16 Incwadi yokuqala eyapapashwa kumathanga eNgilani aseMerika yaba yinguqulelo yeeNdumiso eyayinegama likaThixo ekuthiwa yiBay Psalm Book. Yaguqulelwa ngowe-1640 ngesiNgesi isuswa kwisiHebhere. Isebenzisa igama likaThixo elikwiNdumiso 1:1, 2, yathi: “usikelelwe umntu” ongahambiyo ngecebo labangendawo, ‘kodwa oyoliswa ngumthetho kaYehova.’ Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngokuphathelele igama likaThixo, funda incwadana enemifanekiso ethi Igama LikaThixo Eliya Kuhlala Likho Ngonaphakade.
UYEHOVA ULONDOLOZA INYANISO YOKOMOYA
17, 18. (a) Yintoni inyaniso? (b) Iquka ntoni ‘inyaniso yeendaba ezilungileyo’?
17 Sivuyiswa kukukhonza ‘uYehova uThixo wenyaniso.’ (INdu. 31:5) Yintoni inyaniso? Zizo zonke izibakala eziphathelele into ethile. NgesiHebhere, ulwimi lokuqala eyabhalwa ngalo iBhayibhile, igama eliguqulelwa ngokuthi “inyaniso” libhekisela kwinto eyinyaniso, enokuthenjwa, ethembekileyo, okanye echanileyo. Igama lesiGrike eliguqulelwe ngokuthi “inyaniso” libhekisela kwizibakala ezichanileyo okanye into efanelekileyo nelungileyo.
18 UYehova uye wayilondoloza inyaniso yokomoya wenza nokuba ulwazi esilufumanayo ngayo luye lusanda ngakumbi. (2 Yoh. 1, 2) Siya siyiqonda ngokuthe ngcembe inyaniso kuba “umendo wamalungisa unjengokukhanya okuqaqambileyo okuya kukhanya ngokukhanya de kube semini emaqanda”! (IMize. 4:18) Ewe, sivumelana ngokupheleleyo noYesu, owathi xa ethandaza: “Ilizwi lakho liyinyaniso.” (Yoh. 17:17) IBhayibhile iqulethe ‘inyaniso yeendaba ezilungileyo,’ equka zonke iimfundiso zamaKristu. (Gal. 2:14) Ezi mfundiso ziquka izibakala eziphathelele igama likaThixo, ulongamo lwakhe, idini lentlawulelo likaYesu, uvuko noBukumkani. Ngoku siza kuqwalasela indlela uThixo aye wayilondoloza ngayo inyaniso phezu kwazo nje iinzame zikaSathana zokuyifihla.
UYEHOVA UTHINTELA USATHANA EKUFIHLENI INYANISO
19, 20. Wayengubani uNimrodi, yaye yintoni awayezimisele ukuyenza suka yasilela?
19 Emva komkhukula, kwakukho intetho ethi: “Kanye njengoNimrodi umzingeli onamandla ngokuchasene noYehova.” (Gen. 10:9) Njengomntu olwa noYehova uThixo, enyanisweni uNimrodi wayenqula uSathana nqwa nabo bachasi uYesu awathi ngabo: “Nina niphuma kuyihlo uMtyholi, yaye nithanda ukwenza ngokweminqweno kayihlo. Yena . . . akemi enyanisweni.”—Yoh. 8:44.
20 UNimrodi wayelawula iBhabheli nezinye izixeko eziphakathi komlambo iTigris nomEfrate. (Gen. 10:10) Umele ukuba waqalisa ukwakha iBhabheli nenqaba yayo malunga nowama-2269 B.C.E. Nxamnye nokuthanda kukaYehova bokuba abantu basasazeke emhlabeni, abo bakhi bathi: “Yizani! Masizakhele isixeko kwanenqaba encopho yayo ifikelela emazulwini, size sizenzele igama elidumileyo, kuba hleze sichithakale emhlabeni wonke.” Kodwa loo msebenzi wasilela kuba uThixo “waluduba ulwimi lomhlaba wonke” baza bachithachitheka abakhi. (Gen. 11:1-4, 8, 9) Ukuba ngokwenza loo nqaba uSathana wayecebe ukumanya lonke uluntu ukuze lunqule yena, wakha phantsi isitya sizele. Ukutyhubela imbali, uYehova uye walulondoloza unqulo lokwenyaniso, ibe luya lusiba nochatha suku ngalunye.
21, 22. (a) Kutheni unqulo lobuxoki lungazange luphumelele ekusongeleni olokwenyaniso? (b) Yintoni esiza kuxubusha ngayo kwinqaku elilandelayo?
21 Unqulo lobuxoki alusoze luphumelele ekusongeleni olo luyinyaniso. Ngoba? Kaloku uMyaleli wethu Ozukileyo uye waqiniseka ukuba uyayilondoloza iBhayibhile, ibe abantu bayalazi igama lakhe nenyaniso. (Isa. 30:20, 21) Siyavuyiswa kukukhonza uThixo ngokuvisisana nenyaniso, kodwa simele sihlale siphaphile ngokomoya, sithembele ngoYehova ngokupheleleyo ngoxa sithobela ulwalathiso lomoya wakhe oyingcwele.
22 Kwinqaku elilandelayo, siza kuxubusha ngendlela ezaqala ngayo ezinye iimfundiso zobuxoki. Siza kubona indlela ezibhencwa ngayo ziZibhalo. Siza kubona nendlela uMlondolozi wenyaniso, uYehova asisikelele ngayo ngeemfundiso eziyinyaniso eziyinxalenye yelifa lethu lokomoya ngoku.